Semalt dia manome soso-kevitra amin'ny fanasivanana tranokala ho an'ny famindrazan'ny data
Ny tranonkala izay natao manokana mba hanangonana fampahalalana mahasoa avy amin'ny Internet. Izy ireo koa dia fantatra amin'ny fandaharan'asam-pambolena amin'ny web ary mahasoa ho an'ireo izay miezaka manangona angona avy amin'ny tranonkala samihafa. Misy fitaovana marobe izay manampy amin'ny fanangonana rakitra ary handamina izany amin'ny fomba tsara kokoa - hospedagem de website. Azonao ampiasaina ireo programa ireo mba hanangonana vaovao momba ny vokatra samihafa, ny vidiny, ary afaka mampitombo ny orinasa ao amin'ny Internet. Ny sasany amin'ireo fitaovana fampiasa amin'ny tranonkala sy rindrambaiko dia marefo, raha ny hafa kosa tsy misy vidiny aminao. Amin'ny fampiasana azy ireo dia afaka misintona vaovao avy amin'ny tranokala ianao, miasa amin'ny sehatra samihafa ary mandamina ny angona avy hatrany.
Andeha hodinihintsika ny lisitr'ireo fitaovana maoderina 3 ilaina amin'ny fanangonana angon-drakitra.
1. Mpandalina manam-pahaizana
Azonao ampiasaina ny Scraping Expert mba hanangonana, hikarakarana ary hananganana vaovao momba ny tranonkala samihafa. Io no iray amin'ireo programa mahomby indrindra fanangonana rakitra ary mety tsara ho an'ny mpampiasa vola sy tsy ara-barotra. Maro ireo orinasa sy webmasters no misafidy ny Scraping Expert noho ny endriny tokana sy safidy maro. Raha te-hahazo ny angon-drakitra sasany momba ny mpanjifa ianao ary te-hanatsara ny fampisehoana ny tranonkala, tokony hanandrana ny Scraping Expert ianao. Ny fampahalalana dia azo jerena amin'ny endrika isan-karazany. Manasokajy ny angona avy amin'ny media sosialy, ny fampahalalam-baovao, ny vavahadin-tserasera ary ny toeran'ny varotra..
Malaza be noho ny teknolojia fianarana maoderina i Uipath ary izy io dia fitaovana lehibe amin'ny angona angon-drakitra sy ny fitaovana maoderina. Izy io dia tena tsara ho an'ny coders sy ny coders ary dia mora kokoa ny handresy ireo fanamby fototra momba ny fitrandrahana. Afaka manao asa samihafa mampiasa Uipath ianao, manamboatra tranokala hafa sy tahirin-tsoratra PDF, mahazo vaovao avy amin'ny sary ary afaka mamonjy ireo angona ao anaty fiara sarotra. Azonao atao ihany koa ny manaparitaka ny fisintonana tsindry, mameno fanafody sy asa hafa mitovy amin'ny Uipath ary tsy mila manana fahaizana mandanjalanja. Ity fitaovana ity dia manimba ireo karazan-dahatsoratra samihafa ao amin'ny efijery, ary ny vokatra dia azo amin'ny endriny JS, Silverlight, ary HTML. Uipath koa dia manampy amin'ny fikajiana ny tranokalanao amin'ny milina fikarohana ary dia lafo vidy ho an'ny olona sy fanombohana. Tokony hampiasa io fandaharana io ianao raha toa ka manana orinasa an-tserasera an-tserasera ianao ary te-hikapoka tranonkala mavesatra.
Ny Import.io dia iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra sy avo indrindra amin'ny Internet. Afaka manararaotra ireo toetra manokana samihafa ianao, ary fomba hafa ho an'ny Kimono sy fandaharana hafa mitovy amin'ny tranonkala hafa. Io dia hampiseho ny sarin-javatra tsy mivaingana amin'ny angon-drakitra mifototra amin'ny zavatra takinao sy ny andrandrainao. Ilaina fotsiny ny manasongadina ny angon-drakitra ary mametraka sora-baventy vitsivitsy ary avelao ny Import.io miasa izany. Afaka manosotra ny URL tsirairay avy ianao ary manara-maso ny kalitaon'ny angon-drakitra. Import.io dia manondrana ny angona ilaina amin'ny Google spreadsheets, mamonjy fotoana sy hery be dia be. Azonao antenaina fa hanaparitaka pejy maherin'ny 10.000 ao anatin'ny roapolo minitra, arakaraka ny hamafiny sy ny halavany. Ny tena mahagaga dia ny import.io dia maimaim-poana ary tonga lafatra ho an'ireo tsy mpandrindra.